Umkhiqizo Othengisa Okushisayo
Ukuhlobisa kwasekhaya kwedayimane
ICherish, eyasungulwa ngo-1995, itholakala e-Yiwu, e-China, inhlokodolobha yezimpahla ezincane emhlabeni. Kugxilwe ekwakhiweni komkhiqizo owenziwe ngesandla we-DIY, ukukhiqizwa nokumaketha kwamabhizinisi wokukhiqiza ochwepheshe. Umsebenzi wethu ukushayela ukuthengiswa kwamakhasimende ngomklamo omusha, ikhwalithi ephezulu ...
Mayelana nentambo efekethisiwe
Bazisa abakhiqizi bezintambo zokuzicwala abazenzele futhi bathengise, abakhiqizi bemithombo yangempela, inani elikhulu nentengo ephansi nentengo ephansi, umthombo ophelele wokuqala, inani elikhulu lokuncanyelwayo, Izici zomkhiqizo zikhetha izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme, okungekho lula ukuzenza pilling, akulula ...
Ukufekethiswa igama elijwayelekile kunoma iyiphi iphethini yokuhlobisa efekethisiwe ngendwangu enezinaliti nentambo.
Ukufekethiswa igama elijwayelekile kunoma iyiphi iphethini yokuhlobisa efekethisiwe ngendwangu enezinaliti nentambo. Kunezinhlobo ezimbili zokufekethiswa: okufekethisiwe kukasilika nokuhlobisa izimpaphe. Lapho usilika noma eminye imicu noma imicu ihlatshwa ngenaliti ngomklamo othile nombala kumlingani wokufekethiswa ...
Ikheli: No. 11, Hanxiao Road, Fotang Town, Yiwu City, Isifundazwe Zhejiang, China
Ucingo: 0086 - (0) 579-85838788
Yiba yingxenye yesiko
Imikhiqizo Okufakiwe - Ibalazwe